यो पीडाको मलहम कहाँ पाइन्छ ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
यो पीडाको मलहम कहाँ पाइन्छ ?
- शोभा न्यौपाने
भक्तपुरबाट यस वर्ष जिल्लास्तरीय परीक्षा दिनेहरूमा एक थियो मेरो छोरो, निरज । हरेक दिन परीक्षा दिएर फर्कँदा उसको मुहारमा खुशीका तरङ्ग छाएको देखिन्थ्यो । नेपाली विषयको दिन ऊ विशेष खुशी थियो किनकि उसलाई लागेको थियो कि अघिल्ला वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि उसले अशुद्धि धेरै गरेन, समय अड्कलेर सबै प्रश्नको जवाफ लेख्यो र व्याकरण धेरै मिलायो ।
हुन त विद्यार्थीको परिश्रमलाई अङ्कमा तुलना गरिनुहुन्न तर राम्रो गरेकाहरूलाई राम्रै अङ्ककाे चाहना हुनु स्वाभाविक नै हो, निरजलाई पनि थियो । जुन दिन जिल्लास्तरीय परीक्षाको लब्धाङ्कपत्र विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँसियो, त्यो दिन एउटा अनपेक्षित बज्र बज्रियो, त्यो कोमल मनमाथि। समग्रमा ८८ प्रतिशत नराम्रो पक्कै होइन, हरेक विषयमा ९० प्रतिशत हाराहारी वा माथि थियो नम्बर ।
तर नेपाली विषयमा निरन्तर मूल्याङ्कनबाहेक उसको विषयगत अङ्क ७५ मा जम्मा ३७ देखियो जुन कि मुस्किलले उत्तीर्णाङ्क हेर्दा सानो कुरा हो, तर त्यसले निम्त्याएको तनाबको मापन कसरी हुन सक्छ ? विद्यालयमा पहिलो दोश्रो स्थानबाट पाँचौंमा झर्नुसम्मलाई पनि पचाउन सकिन्थ्यो तर व्याकरण पूरा जसो मिलाएर बाँकी सबै प्रश्नको जवाफ दिँदा पनि जम्मा ३७ ! एक पलमा कति कति सपनाहरू भत्किए उसका र कति कति तार चुँडिए मेरो आफ्नै अपेक्षाका । हामीले डिस्टिङ्गसनको खुशी सेलिब्रेट गर्न सकेनौं । हामीले कसैलाई मिठाई बाँडेनौं । तनाबमा बिते केही दिन ।
अन्ततः पुर्नपरीक्षणका लागि निवेदन हालियो । आज पुनर्योगको नतिजा आएछ । विद्यालयले दिएको जानकारी अनुसार नेपाली विषयमा उसको प्राप्ताङ्क देखियो ६१/७५ (क्याससहित ८६) । हो, यो चाहिँ हो, मेरो बाबुले पाएको अङ्क र यसमा हामी खुशी छौं तर त्यो खुशी हामीले यी दुई हप्ता बेहोरेको तनाबको तुलनामा कयौं गुणा कम छ । बाबुको लब्धाङ्कपत्र त सच्चिने भयो तर एउटा शिक्षकको चरम लापरबाहीका कारण एउटा तेज बच्चाको दिमागमा र उसको परिवारमा जुन असर प¥यो, के त्यो सजिलै मेटिन्छ ? यो दुई हप्तामा कुनै अप्रिय घटना भएको भए त्यसको जिम्मेवार को हुन्थ्यो ? १ वा २ होइन यहाँ त सिधै २४ अंकको फरक देखियो र त्यो भनेको सानो र क्षम्य गल्ती हुँदै होइन ।
के आठ कक्षाको उत्तरपुस्तिका जाँच्ने शिक्षकलाई १ देखि ७५ अंकसम्मको हिसाब जोड्न पनि आउँदैन ? कसले तोक्छ जाँचकी ? के आधारमा तोकिन्छ जाँचकी ? कसले तोक्छ समपरीक्षक ? यस्ता घटनालाई लिएर त्यस्ता शिक्षकहरूसँग क्षतिपूर्ति माग किन नगर्ने ? तिनलाई सेवाका लागि अयोग्य घोषित गरी सेवाबाट किन नहटाउने ?
मार्कसिट सच्चिँदैमा मेरो र मेरो छोराले दुई हप्ता बेहोरेको पीडाको हिसाब बराबर भएन । मलाई थाहा छैन–यसका लागि मैले कहाँ जानुपर्छ ?मेरो गुनासोको सुनुवाइ कसले गर्छ ? तर म उक्त शिक्षकको गैरजिम्मेवारीको घोर निन्दा गर्दै उहाँमाथि कारबाहीको माग गर्दछु जसले मेरो छोरोको नेपालीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुभयो र ६१ को ठाउँमा ३७ लेखेर पठाउनुभयो । अन्यथा भन्नोस् यो पीडाको मलहम कहाँ पाइन्छ ?
अभिभावक मित्रहरू, हाम्रो शिक्षाले बालबालिकाहरूलाई के छाप छाड्न चाहन्छ उनीहरूको कलिलो मनमा ? कस्तो छाप दिन चाहन्छ उनीहरूको मनमा ? हामीले यस प्रकारका प्रश्न उठाएनौं भने, हाम्रा बाबु नानीहरूमाथि पर्ने बज्रहरूको पीडा बाँडेनौ भने, कसले खोजिदेला ? सचेत अभिभावकहरूले आफ्नाे मात्र होइन, आम छोराछोरीले भोग्नु परेका मानसिक आक्रमणहरूका विरूद्ध आवाज उठाउनै पर्छ । जसले आउँदा दिनहरूमा कसैले यो पीडा भोग्नु नपरोस् ।